Faysal Cali Waraabe Oo Ka Hadlay Heshiiska Qaar Kamida Xildhibaannada UCID ...
Axad, Luulyo, 18, 2021 (Wararka-Maanta) – Guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe, oo waraysi siiyay BBC, ayaa sheegay in xildhibaanada UCID ee Kulmiye la heshiiyay ay sharci jabin sameeyeen.
“Heshiis kaasi waa heshiis aan sharci ahayn, waxa heshiis gali kara uun madaxda xisbiga khaasatan guddoomiyaha” ayuu yidhi.
“Xildhibaannimadooda ayay khatar galinayaan, sharcigu wuxu sheegayaa in xildhibaankii jabiga shuruucdi lagu soo doortay uu kursiga banaynayo” ayuu yidhi.
“Musharax kastana horey ayaanu uga saxeexnay, marka heshiiskaasi waa wax aan waxba ka jirin” ayuu hadalkiisa ku daray.
“Markay xildhibaanka Kulmiye u codeeyaan, ayaanu talaabo ka qaadi doona kursigana way waayi doonaan” ayuu yidhi.
Wararka Maanta : Somaliland: Mudaharadayaal dab qabadsiiyay calanka Soomaaliya